Xulka Ciyaartoyda Togdheer Oo Af-ka Ciida Loo Daray Kadib Markii Xulka Hawd Ugu Quusgooyeen Afar Gool | Araweelo News Network (Archive) -
Xulka Ciyaartoyda Togdheer Oo Af-ka Ciida Loo Daray Kadib Markii Xulka Hawd Ugu Quusgooyeen Afar Gool
Burco(ANN)Xulka Gobolka Togdheer oo haystay horyaalka koobka ciyaaraha gobolada ee dalka ayaa maanta ka hadhay tartanka ciyaaraha gobolada ee ay marti gelinayaan ka dib markii xulka gobolka Hawd oo ku cusub tartankani
ay 4-1 kaga badiyeen ee ay Af-ka ciida u dareen.
Ciyaartan oo labada kooxoodba u ahayd ciyaartii sadexaad waxay ku bilaabantay ciyaar adag, waxase xulka gobolka Togdheer ka muuqatay isku xidhnaan la’aan, taasi oo sababtay in qeybtii hore ee ciyaartu ay ku dhammaatay laba gool iyo eber ay ku hoggaaminayay xulka gobolka Hawd, waxaana u kala dhaliyay Haybe Maxamed oo sitay lambarka 10-aad Keyse Cabdi oo sitay lambarka 19-aad.
Ciyaarta markii la iskugu soo noqday qeybtii labaad waxa xulka Gobolka Hawd la yimaadeen Goolkii sadexaad oo uu u saxeexay Haybe Maxamed oo sitay lambarka 10-aad.
Wax yar ka dibna waxa goolkii afraad raacsaday Ciyaaryahanka magaciisu yahay Khaalid Diiga oo sitay lambarka 13-aad, halka goolka madiga ah ee xulka gobolka Togdheer uu dhaliyay Maxamed Axmed Dhiko .
Wax rabashado ahi kamay dhicin ciyaartan marka laga reebo dhagxaan yar yar oo qaar ka mid ah taageereyaasha Tog-dheer ay ku soo tuurtuurayeen gool haya xulka Hawd dhamaadkii ciyaartaa.
Labadan xul waxay ku wada jireen group A ama qeybta koowaad. Waxaanay xulka Hawd leeyihiin 6 dhibcood, iyadoo sadexdii ciyaarood ee ay yeesheen ay laba ka mid ah badiyeen, halka ciyaartoodii labaadna laga badiyay oo ay Hargeysa laba iyo eber ku jiidhay.